Ny filohan'i Etazonia: Vaovao vaovao - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny Filohan'ny United Kingdom tany grande-Bretagne sy Irlandy Avaratra, Donald trump, miampanga an'i Pakistana ny mamela ny mpampihorohoro mba handray ny fitodian-tsambo, raha ny firenena MIKAMBANA dia Milaza mihaza ao AfghanistanAnkehitriny Pakistan efa nanendry ny Ambasadaoro Milaza ny Firenena Mikambana. Ny Filohan'ny United Kingdom tany grande-Bretagne sy Irlandy Avaratra, Donald trump, voalaza Pakistana tao amin'ny tweet tamin'ny fiandohan'ny taona vaovao. Satria izy, ilay lazaina fa new York mpamono olona any Guantanamo, naniry azy mba ho toy izany, Donald trump indray voafitaka. Mpisolovava nampiseho ny Filoha fa tanteraka implausible lohahevitra tsy maintsy misy Olona efa nampiasa vola tao Donald trump. Fotoana fohy mialoha ny fanambarana ny loka Nobel fandriampahalemana, Filohan'i Etazonia i Donald trump indray nanangana fiampangana Tehran. Mazava tsara, ny trano Fotsy dia mitaky fa Iran no tsy manaraka ny fifanarahana ara-nokleary miaraka amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ho fanamarinana ara-panjakana. NEW YORK (dpa-AFX)-ny alarobia any Etazonia ho fahatsiarovana ny tara ny Filoha teo aloha George H. Ny tatitra dia amin'ny asabotsy, ary ny haino aman-jery Amerikana dia ny fanakatonana. Araka ny fianakaviany, dia izao Roimemy, ary tamin ny taona ny taona, dia maty. Teo aloha ny Filoha AMERIKANINA, George Bush, maty teo amin'ny faha-taona maro.
George Bush dia ny Filohan'ny United States
Nanambara ihany koa amin'ny zanany George Bush. Washington (Reuters) - ny Filoha teo Aloha Etazonia Barack Obama nitsidika ny ankizy ao amin'ny hopitaly ao Washington, ary nomena avy Amin'ny Dadabe Noely satroka eo amin'ny lohany ny fanomezana ny tanora, ny marary.
Ankizy-pirenena medical center.
Washington (Reuters) - Donald Trump. Filohan'i Etazonian'i Amerika. Eo ny fifidianana, tsy misy ny mpanohitra ny trompetra, Hillary Clinton, araka ny Amerikana Masoivohom-baovao AP, dia tsy manana fahafahana hahazo ny zo amin'ny fifidianana maro. Barack Obama mampiseho ny fo ho an'ny ankizy. Amin'ny ankizy ao amin'ny hopitaly ao Washington, Dadabe Noely tsy ampoizina tanora marary. ny ankizy, asa fanompoana ho an'ny mpiasa sy ny fianakaviany avy amin'ny trano bongony. Tsara tarehy, marary ny mofomamy kely cupcake amin'ny ankizy ao amin'ny hopitaly ao Washington. Ny Filoha iraniana Hassan Rouhani dia miantso ny Firenena Silamo mba hihaona amin'ny Etazonia mba hahatohitra izany. Izy no mahatonga ny Israely sy ny"RAK". Izany no iray amin'ireo ratsy indrindra vokatry ny ady lehibe Faharoa.
Ireo no teny fampiononana sy ny firaiketam-po fa teo aloha i Etazonia ny Filoha George W.
Bush hita fa ny tara ray, George H. izy namariparitra ny tamin'ny antso an-telefaonina nandritra ny fandevenana. Amin'ny nampihetsi-po ny kabary nataony tao amin'ny Pirenena Cathedral. Mandehana any amin'ny nohavaozina ho an'ny navigateur haingana kokoa sy azo antoka kokoa ny fikarohana.
maimaim-poana tsy an-kanavaka dokam-barotra jereo ny lahatsary amin'ny chat ny lahatsary amin'ny chat vehivavy Fiarahana ho maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana amin'ny sary videos hiresaka tsy misy video ny lahatsary amin'ny chat tsy voafetra ho maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat tsy misy sonia ary maimaim-poana ny tovovavy adult Dating free video free Chatroulette